Safiirka Turkiga oo GoonI Gooni Ula kulmay Guddoomiyaha Barlamaanka iyo Ra'isul Wasaaraha | SAHAN ONLINE
MUQDISHO– Safiirka dowladda Turkigu u soo dirtay Soomaaliya Mehmet Yilmaz ayaa maanta kulamo gooni gooni ah la yeeshay Ra’iul Wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali khayre iyo Guddoomiyaha Barlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre iyo Mehmet Yilmaz oo safiirka ku qaabilay xafiiskii waxa ay ka wada hadleen wada-shaqaynta iyo dardar gelinta xoojinta xariirka walaaltinnimo ee Turkiga iyo Soomaaliya.
“Waxa aan ku faraxsanahay in aan maanta soo dhaweeyo safiirka cusub ee Turkigu usoo magacaabay Soomaaliya, Mehmet Yilmaz, oo ah rug-cadda horumarineed iyo Saaxiib Soomaaliyeed. Waxa aan rajaynayaa in uu sii amba qaado cusubka iskaashiga labada dawladood.” ayuu yiri ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre.
Dhinaca kale, Guddoomiyaha barlamaanka federaalka ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Danjiraha cusub ee Dowladda Turkiga usoo magacoowday Soomaaliya Maxamed Yilmaz ,waxaana ugu horeyn Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu danjiraha cusub kusoo dhoweeyay Soomaaliya oo hada shaqadiisa ay toos uga bilaaban doonto.
Waxa ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka walaaltinimada ku dhisan ee ka dhaxeeya labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga sidii loo xoojin lahaa iyo sidoo kale sidii Dowladda Turkiga ay usii dar dar gelin laheyd taageeradda dhinacyada kala duwan ee ay mar walba la garab taagantahay dowladda federaalka.
Safiirka cusub ee Turkigu usoo magacaabay Soomaaliya oo bedelay safiirkii hore Amb. Olgan Bakar, ayaa madaxwayne Maxamed Cabdullahi Maxmed (Farmaajo waxa uu maanta ka guddoomay warqadaha aqoonsiga safiirnimo.